Topimaso Ao Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Syriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2017 19:49 GMT
Raha hitan'i Joshua Landis avy ao amin'ny SyriaComment.com ho fiatombohana tsara ity dingana ity, manahy kosa anefa izy fa tsy hanana ilay vokatra andrasana aminy io raha tsy harahinà hetsika hafa.
Milaza i Rime Allaf avy ao amin'ny Mosaics fa tsy hahomby mihitsy io dingana io, raha oharina amin'ny fanohanan'i Etazonia ny Irakiana mpanohitra ny fitondran'i Saddam Hussein. Mahatsapa izy fa mahatsiaro voaro nòho ny hatramin'izay ny fitondrana satria tsy liana amin'ny fiovàna fitondràna atsy ho atsy i Etazonia.
Miala amin'ny pôlitika, namoaka lahatsoratra manjopiaka momba ireo ankizy Syriana, ny nofinofin'izy ireo, ny tahony ary ny fanantenany ho amin'ny hoavy, i Ghalia ao amin'ny Cocktail.
Farany, lahatsoratra iray mafonja nosoratan'i Ayman avy ao amin'ny The Damascene Blog, mampiseho sariitatra avy amin'i Naji al-Ali…